Maydadka dhawr iyo Labaatan qof oo Soomaali ah oo ku soo caaryay xeebta Laas-qoray | FooreNews
Home wararka Maydadka dhawr iyo Labaatan qof oo Soomaali ah oo ku soo caaryay xeebta Laas-qoray
Maydadka dhawr iyo Labaatan qof oo Soomaali ah oo ku soo caaryay xeebta Laas-qoray
Laas-qoray (Foore)- Maydadka dhawr iyo labaatan qof oo Soomaaliya ayaa ku soo caaryay maalmihii la soo dhaafay xeebta degmada Laas-qoray ee gobolka Sanaag, siday sheegeen goob joogeyaal ku sugan halkaasi.
“Maydadkan soo caaryay waxay ka soo caaryeen meelo la yidhaahdo Cad-cado iyo Dur-duri, laakiin waa Laas-qoray waa meesha ugu dhow ee looga gurmaday intii dhimatay waxa lagu aasay intii dhimatay waa 14 qof oo anigu 9 ka mid ah ayaan aaskooda ka qeyb galay,”ayuu yidhi Maxamed Caynab oo maanta u waramayay Laanta Af-soomaaliga ee VOA-da.
Maxamed oo hadalkiisa sii watay wuxuu intaasi ku daray “Dadkii iyagoo nool la helay waxay ahayeen todoba qof oo aad u liitay waxaana loo kala qaaday Cisbitaalo. Dadkaasi muddo dhawr iyo labaatan qof ayay ahaayeen oo dumar u badan. Muddo sadex maalmood ah ayay soo kala caaryeen maalintii hore 14 ayay ahaayeen.”
Maxamed wuxuu sheegay maydadkii ay aasaseen wajiyadoodu bedelmeen oo aan la aqoonsan Karin, hase yeeshee ay ku suureeyeen Soomaali.
Maxamed Caynab ma uu sheegin halka ay dadkaasi ka yimaadeen, waxase uu xusay inay badda doonyo ay saareen kula qar-qantay.
Previous PostDawladda Denmark oo caalamka ugu baaqday in la Taageero Somaliland Next PostMadaxweyne Siilaanyo oo xilkii ka qaaday laba masuul oo ka tirsan Xukuumadiisa